Lukaku waxa uu ku socdaa howlo: uu kula guuleysto Inter oo uu caddeeyo in Manchester United ay khaldan tahay
ACCUEIL » SPORTS Lukaku wuxuu ku socdaa himilo si uu ula guuleysto Inter wuxuuna caddeeyaa in Manchester United ay khalad tahay
MILAN, Italy - “Waxay noqon laheyd kooxdii aan u baahnaa,” ayuu yiri Romelu Lukaku. Isaga oo fadhiya qolka shirarka ee Porta Nuova, oo ah ganacsiga ganacsiga ee soo ifbaxaya ee Milan, wuxuu sheegtey in Naadiga Kubadda Cagta ee Internazionale Milano ay ahayd goobta ugu habboon ee dib loogu bilaabayo mustaqbalkiisa. "Waxaa jira jacaylka aan u qabo gobolkan," ayuu yidhi. “Jacaylka aan u qabo Inter. Iyo waqtiga ugu habboon ee looga tago England. Ma dooneynin inaan halkaas joogo mar dambe. ”
Maahan wax ku soo aadaya in kooxdu ay ku xisaabtameyso Lukaku, kaasoo labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeysay la qaatay Manchester United, si uu ugu dhiiri geliyo dhalashada. Waqtiyada adag waxay u tahay Inter, oo ku guuleysatay Champions League 2010 Champions League, kuna dhameysatay shan sano oo Serie A ah 2010, laakiin ma aysan dhameysan kaalinta afaraad. Waxaa taas ka sii sii daran, in kasta oo ay jiraan saldhig faneed oo aan kala go 'lahayn oo wali sii socda oo buuxinaya ku dhawaad ​​San Siro, oo ah mid ka mid ah garoommada ugu waaweyn qaaradda Yurub, Inter ayaa ku daatay usbuuc ilaa toddobaadyo ah addinka caalamiga ah. Markaad guuleysato mid kasta oo ka mid ah sideedii udambeeya ee ugu dambeysay ee aadna la dhacsan tahay Cristiano Ronaldo, Juventus waa kooxda Talyaaniga ee lagu tiriyo waqtiga xaadirkaan. ] - MLS waxay weerartaa mudaharaadyada aadka u jecel Portland
- - ESPN Fantasy: Hada isdiiji!
Steven Zhang, oo ah baananka dilettante ee haysta shahaadada Wharton, ayaa balan qaaday inuu badali doono arintaas. 2016, aabbihiis bilyaneerka ah wuxuu iibsaday Inter. Sagaal bilood ka hor, wuxuu siiyay Zhang kaasoo, 28, oo kaliya ka weyn laba sano Lukaku. Macalin Zhang, Inter waxay malaayiin euro ku bixisay muuqaalka cusub ee kooxda iyadoo ah koox soo jiidasho iyo firfircoon, iyo malaayiin kale oo ka badan kooxda haatan. Antonio Conte, oo ku guuleystay labada Serie A iyo Premier League, ayaa loo shaqaaleysiiyay tababare ahaan. Daafaca qadka dhexe Diego Godin ayaa si xor ah ugala soo wareegay Atletico Madrid. Heshiis amaah ah oo loo sameeyay Alexis Sanchez, kaasoo goolal badan ka dhaliyay Barcelona iyo Arsenal, ka dibna aad uga yar Manchester United, ayaa la saxiixay dhamaadka suuqa kala iibsiga. Laakiin Lukaku, oo umuuqday mid caan ku ahaa caannimada markii uu ka tagay Everton laba sano ka hor, ayaa ahaa qabqabashada ugu weyn. Lacagta 65 milyan ee wareejinta ee ay bixisay Inter ayaa garaacday rikoorka kooxda.
Doorka Lukaku waligiis kuma adka inuu sharraxo. Xitaa maaha inaad daawatid isaga oo ciyaaraya. Xaqiiqada macquulka ah ee araggiisa muuqaal ahaan u eg oo jimicsi ah - wuxuu cabirayaa 6 3 cagood dherer, garbaha ballaaran, qeexid wareejin - wuxuu ku filnaaday inuu kicinayo sawirada isaga oo ka dhigaya meel ku taal geeska sanduuqa, isagoo qabanaya difaacayaasha inay helaan kubbadda, ka dibna dhanka hadafka. Wuxuu sidoo kale lahaa xawaare la yaab leh oo cabirkiisa ah; Markii uu joogay Everton, ma ahayn wax aan caadi aheyn isaga inuu ku garaaco daafac kubbad dabacsan, ka dib ku orod meelaha durugsan sida garabka NFL ama dib u ordaya. "Waad daawan kartaa waqti dheer," ayuu yiri Sanchez, oo ka garab ciyaaray Manchester United, "mana ka heli doontid qof kale oo la mid ah meel kasta oo adduunka ka mid ah."
Dhibaatada ayaa ah in Lukaku uusan dhulka joogin wax ka badan hal sano. Qiyaasaha ayaa kala duwan, laakiin wuxuu qaatay ugu yaraan £ 15 rodol gudaha Manchester. Jirkiisa oo caloosha ku jira ayaa u rogay natiijada calool xanuun, laakiin waqtigaas wuxuu umuuqday inuu yahay astaanta saxda ah ee kala dirida naadiga. “Wax la cafiyi karo ma ahan,” ayuu carabka ku dhuftay xiddigii hore ee Manchester United Gary Neville, kaasoo Lukaku ku eedeeyay inuu yahay mid aan xirfad laheyn. Cayil badan ma noqon karo. "
Maxaa ku dhici doona Lukaku wuxuu u adeegi doonaa inuu qeexo meherad ilaa iyo hadda ka badneyd kartidiisa iyo jawaabihiisa codkarnimada leh ee ka careysiinaya cunsurinimada wixii guul la taaban karo laga gaari karo. Lukaku wuxuu ku adkaysanayaa inuu baxayo. “Kooxdan aan halkan ku heysano waa koox gaar ah, ayuu yiri. "Anaguna waxaan haysannaa hogaamiyaha saxda ah ee horteenna inooga kaxeeya meelaha saxda ah. Inter waa naadi hami leh. Waxa uu doonayaa inuu ku laabto halka uu u baahan yahay. ”
Lukaku horey ayuu ugu fadhiistay kursigiisa. Waxaan rabaa inaan ka caawiyo iyaga inay wax uun dhistaan ​​halkan, ayuu yidhi. "Waa xulashadayda saxda ah aniga."
Lukaku waxa uu sheegay in uu ahaa xiddigii ugu fiicnaa ee Manchester United. “Ma dooneynin inaan halkaas sii joogo,” ayuu u sheegay ESPN ka dib markii uu ku biiray kooxda Inter ee ka ciyaarta horyaalka Serie A. Getty
Xoogga uu Conte u keeno koox, jir ahaan iyo falsafad ahaanba, waxay u muuqataa inay leeyihiin saameyn degdeg ah. Bari wuxuu si dhakhso ah ugu dhex galay 2007 markii uu ka noqday waxbarashadiisa wuxuuna u horseeday dhiirrigelinta 2009. Xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay ee Siena ee 2010-11, wuxuu dib u soo celiyay naadiga Serie A. Sannadkii xigay ee Juventus, wuxuu ku guuleystay kii ugu horreeyay ee saddexdiisa Scudetti halkaas wuxuuna ku daray Coppa Italia. Shaqadiisa ugu weyn ee sixirka ayaa ah kooxda dhaawaca ee Chelsea, oo laga dhaxlay Guus Hiddink, kaasoo ka dhaxlay Jose Mourinho. Macalin Conte, Chelsea ayaa rikoor ka dhigtay Premier League markii ay ku guuleysteen 13 kulan oo isku xigta, ka dib cinwaanka 2016-2017.
Markii uu ahaa Chelsea, Conté wuxuu la wareegay qolka labiska ee kooxda Inter oo wuxuu u soo dhoweeyey isaga kartidiisa. shakhsiyadda. Lukaku ayaa yidhi: "Ninkii wuu samayn karaa koox." Waa markii horeba sidii inay raggu halkaas joogeen sannado badan, sannado badan oo wada jir ah, xitaa kuwa hadda yimid. Waa waxa ugu xiisaha badan. "Tale wuu sameeyaa, ugu yaraan in yar, maxaa yeelay wuxuu leeyahay hadiyad ku qancinta xitaa halyeeyadii hore xilliyada badan. Andrea Pirlo oo u ciyaara kooxda Juventus ayaa yidhi: “Marka Conte hadlayo, ereyadiisu way ku weerarayaan. buugiisa. Pirlo wuxuu raaciyay, “Waxaa iga lumiyey tirinta dhowr jeer oo aan is-idhi anigoo dhahay 'Illaahow wanaagsan, Conté ayaa yiri wax runtii xiiso leh maanta. Waxaan filaayay inay fiicantahay, laakiin ma fiicna.
Conte wuxuu si xiise leh Lukaku uga soo qaatay 2014. Wuxuu u arkay inay tahay astaan ​​u gaar ah oo weeraryahan ah: isku mid ah, la qabsan kara, xoog dabeecadeed. Conté wuxuu joogay Juventus markii uu u yeeray Lukaku xagaagii. "Kaalay ii ciyaar aniga," ayuu yiri Conte. Lukaku wuxuu qirtay inuu ahaa nin faqri ah, laakiin hadda waxaa loo wareejiyay Everton ka dib markii uu halkaas ku ciyaaray mid ka mid ah amaahdii aan dhamaadka lahayn ee Chelsea. Isaguba wuxuu sidoo kale lahaan jiray 21 sano kahor. Wuxuu madax u noqday Belgium koobka adduunka. "Waxaa i dhinac joogay aniga oo leh, sug daqiiqad," ayuu yidhi. Ugu dambayntii, waxaan ku idhi, imminka kuuguma imid. Laakiin fursadda xigta, waan joogi doonaa. '"Waxay noqotay mid nasiib wanaag ah. Dhamaadkii xagaaga, Conte wuxuu ka tagay Juventus wuxuuna tababar ku qaadanayay Italy.
Laba sano kadib Conte wuxuu soo laabtay Lukaku kadib. Xaaladaha deg-degga ah ee Conté ayaa keenay Chelsea xilli-ciyaareedkan sixir-bararka, laakiin wuxuu arkay nabaad-guur ka soo dhacaya Manchester City. Wuxuu u baahnaa ciyaaryahan qaas ah wuuna ogaa cidda uu raadinayo. Lukaku wuxuu noqday mid ka mid ah xiddigaha da 'yarta ugu fiican Premier League sidoo kale Everton si cad uma aysan helin awood ay ku sii haysato. "Waxaan moodayay in la sameeyay," ayuu yiri Lukaku. Waxay ahayd. "Xaaladaha," Lukaku wuxuu ku sharxay xashiish. Ma ahan qaladkeyga, maahan shaqadiisa. Markii uu ku soo degay Manchester United 2017, waxay aheyd naxdintii xagaaga Ingriiska.
Horraantii sanadkan, markii uu ogaaday in Conte loo jiheysan karo Inter, Lukaku wuxuu u qaatay calaamad muujinaysa in meerayaasha ay ugu dambeyntii bilaabeen inay saf la galaan. . Wuxuu xasuustaa daawashada kooxdu ku guuleysatay UEFA Cup 1998 wuxuuna go’aansaday in xargaha madow iyo buluuga ah ay ku habboon yihiin. "Finalka ugu horeeya nooc kasta oo aan xusi karo," ayuu yidhi. "Waligaa taasi ma dhumin doontid." Lukaku wuxuu diyaar u ahaa inuu isagu iskiis u guuro.
Wuxuu bilaabay inuu barto afka talyaaniga
Markii uu yimid Inter, Conte wuxuu u diray Lukaku inuu la tashado nafaqo-yaqaan si uu ugala tashado. si faahfaahsan ayuu ugu daray daraasad ku saabsan wasakheynta jirkiisa wasakhda. Ka dib maalmo 12 oo ah cunno cusub, wuxuu lumiyay ku dhawaad ​​10 rodol. Getty
Lukaku luqado ayey u ururisaa si la mid ah sida ay taageerayaashu u ururiyaan xarkaha. Wuxuu ku koray Beljamka, isaga oo ku hadlaya afka Faransiiska guriga iyo Flemish, oo ku nool luqadda Nederlandayska ah, dugsi. Wuxuu la xiriiray eheladiisa reer Congo ee Lingala. Intii uu jidka ku jiray, wuxuu soo qaatay Ingiriis iyo Boortaqiis, Isbaanish iyo qaar Jarmal ah. "Mararka qaar madax xanuun ayaa i haya," ayuu yidhi.
Lukaku wuxuu daawanayay telefishanka dayax gacmeedka talyaaniga maxaa yeelay walaalkiis ka yar, Jordan, wuxuu u ciyaarayay Lazio. Laakiin wuxuu bilaabay bilowistiisa bishii Abriil, halka wararka xanta ah ee Conté ay sii xoogeysteen. Bishii Meey, wuu sheegi karaa fikradaha qaar. Bishii Juun, amarkiisa Talyaani waxaa ku xaddiday ereyadiisa kaliya. Bishii Luulyo, wuxuu "la yeelan karay qof wada hadal ah", ayuu yidhi. Markii uu yimid Inter bishii Agoosto, wuxuu ku booriyay asxaabtiisa inay la hadlaan isaga oo ku hadlaya afka talyaaniga, oo aan aheyn Ingiriis, sida inuu ka yimid Milan oo ka yimid Frosinone ama Sassuolo. Wuxuu rabay inuu la kulmo shuruudahooda, maahan. "Way dhunkadeen anna waan dhunkaday," Lukaku ayaa yidhi. "Waxay la mid tahay inaan halkaas joogay bilo badan."
Wuxuu ku adkeystay in kuhadlida luuqada maxaliga ah inay ka caawineyso inuu joogo garoonka. “Waa ii muhim aniga inaan isqarxiyo asxaabteyda xulka” Aniga ahaan ciyaartoy ahaan aniga ahaan muhiim ayey ii tahay inaan sifiican u fahmo nafsadeyda. Sidaan doonayo kubadda. Meesha aan doonayo kubadda Dhanka hore ee daafaca, waxaa ku xiga daafaca, gadaashiisa daafaca. Waa inaan ogaadaa ereyadan saxda ah ee afka talyaaniga maxaa yeelay khiyaanooyinka ayaa ku kala duwan luqad kasta. Ma jiro bedel taas. "
Erayada ayaa ku shaqeeyey, hal af ama mid kale, ku dhawaad ​​meel kasta oo uu aado, wuxuu ka yimid Anderlecht, Belgium, illaa West Bromwich Albion, halkaas oo Chelsea ay amaah ku siisay markii ugu horreysay iibsashadiisa. ee 2011, at Everton, halkaas oo uu ku dhaliyay goolasha 68 afar xilli ciyaareed. Waxa uu ciyaaray, sikastaba si siman ayuu Mourinho uga hoos ciyaaray Chelsea 2011, iyo ka dib markii Mourinho uu ku saxeexey magaalada Manchester xagaagii 2017, kulanka wuxuu umuuqday mid isfaham ah. Lukaku wuxuu dhaliyay goolasha 11 goolashiisii ​​ugu horreeyay ee 10. Laakiin sida wax walba oo ka dhacay Old Trafford bilihii ugu dambeeyay ee Mourinho, ciyaartii Lukaku wuu sii xumaaday. Markii Ole Gunnar Solskjaer uu xukunka la wareegay bishii Diseembar ee la soo dhaafay, wuxuu u ciyaarayay sidii hoos oo kale.
Hooska sidoo kale, dareenka weyn, ballaaran, ku dhowaad qaab la'aan. Iyada oo la socota culeyska dheeriga ah, awooddan lagu aruurinayo kubbadda loona qaado aagga weerarka, ee u adeegtay inay ka soo horjeesato xooggeeda bartilmaameed, ayaa gabi ahaanba la waayey. Taabadalkeed, wuxuu umuuqday inuu socdo, hal talaabo dib u laabasho. Solskjaer kuma soo bilaaban kulankiisii ​​ugu horeeyay ka dib markii uu la wareegay, ama shanta soo socota. “Solskjaer wuxuu doonayaa qof leh xoog tamar leh, xawaare yar, qof si adag u shaqeyn doona,” ayuu yiri Paul Scholes, ciyaaryahankii hore ee United, oo ku saabsan Lukaku. Ma uusan dooneynin inuu amaano.
xiddig, Lukaku ayaa lagu eedeeyay inuu ku guul darreystay xil ka qaadista Mourinho. Lukaku hadda ayuu yidhi. "Taas macnaheedu waa" adiga. Ma. Sababta. ""
Under Solskjaer, oo ka go'an dib u dhiska, waligiis fursad ma uusan helin. “Waxaan si fiican u tababarnay Lukaku,” ayuu yiri Sanchez, oo aan wax gool ah ka dhalin Premier League intii uu joogay Solskjaer. “Laakiin waa inaan ciyaarno kulamo badan si aan u gaarno heerkeenna ugu wanaagsan.” Marka gadaal laga eego, ayuu Sanchez sii raaciyay, xaaladdu midkoodna kuma habooneyn midkoodna. “Waqti fiican uma aheyn inaan joogno Manchester,” ayuu yiri. Isbeddello aad u badan. Marka aad wax badasho, way adag tahay.
Inter ayaa hada ka shaqeyneysa nooc kala guur ah, iyadoo hadafku yahay in hada guuleysto ama ugu yaraan. Lukaku waa kaliya 26 sano, laakiin magaalada Manchester, wuxuu umuuqday inuu qayb ka ahaa jiilkii hore. Tale si gooni ah ayuu u arkaa, iyada oo ah hibo wali soo muuqata. “Runtii aad ayaan ugu qanacsanahay sida Romelu ay uga go’antahay qaabkii uu u dhaqmay,” ayuu yiri Conté. “Wali wuxuu heystaa meelo badan oo lagu horumariyo farsamada iyo jir ahaan, laakiin sidoo kale si xeeladeysan. Laakiin maadaama uu leeyahay rabitaan ah inuu horumar sameeyo, wuxuu noqon karaa mid ka mid ah weeraryahanada adduunka ugu fiican.
Isla markii Lukaku yimaado. Milano, Conte wuxuu u diray nin nafaqo-yaqaan ah si uu ugala tashado si aad u faahfaahsan oo ay kujirto daraasad ku saabsan wasakhda jirkiisa wasakhda leh. Dhowr saacadood gudahood ayaa la go'aamiyay in wax khaldan yihiin. "Caadi ahaan, waxaan haystaa nidaam dheefshiido wanaagsan," ayuu yiri Lukaku. Wax walba si dhakhso ah ayaan u dheefshiido. Taasi waa sida aan noloshayda oo dhan noolaa. Laakiin waxa nafaqo-yaqaanku ii sheegay inay ahayd inay shaqadii joojiso.
Waqtigii Lukaku ee Man United ma uusan aheyn mid xun. Muuqaalada sare ee xilli ciyaareedkii hore waxaa lagu calaamadiyey labo jibaar guushii 3-1 ee lugtii hore ee ka dhanka aheyd PSG wareega 16es ee Champions League. Chris Brunskill / Fantasista / Sawirro Getty
Waxay ku xaddidan tahay cunno aad u khaas ah oo ka kooban kalluun baradho, baastada shiitake iyo khudradda la kariyey iyo khudradda cayriin, Lukaku waxaay maray isbadal. Maalmihii 12, wuxuu lumiyey ku dhawaad ​​10 rodol. Markii baruurta jirka lagu cabiro xarunta tababarka inta lagu gudajiray usbuuca koowaad ee Sebtember, waxaa loo sheegay inuu ka mid ahaa kooxda ugu hooseysa. "Waan fiicanahay hadda," ayuu yidhi. Jidhkaygu wuxuu joogaa aagga.
Laakiin xaaladda jirka ayaa ah bilowga hawsha. In kasta oo Lukaku inta badan u ciyaaray hal weeraryahan qaab ciyaareed kala duwan inta lagu gudajiray xirfadiisa ciyaareed, Conte wuxuu doonayaa inuu u adeegsado iskuxirka mudnaanta leh, dheecaan, ayaa lagu cadaadiyey 3-5-2. “Sababtoo ah muuqaalkiisa jir ahaaneed, si fiican ayaa loogu meeleeyay inuu hogaamiyo khadkiisa lambarka gaarka ah ee 9,” ayuu yiri Roberto Martinez, oo maamula Lukaku xulka qaranka Beljamka oo sidoo kale u jiheystay Everton, emayl loo diray. ilaa ESPN. Martinez wuxuu xusey in Lukaku uu la ciyaarayay garabka midig isagoo da 'yar isagoo ku sugan Belgium isla markaana uu sidoo kale si guul leh u wada shaqeeyay, in kasta oo si kooban, uu ula qaatay Arouna Kone oo Everton ah. Laakiin la mid ma ahan in la wadaago booska labaad weeraryahan isbuuc isbuuc walba.
Weeraryahanka kale ee weerarka ka ciyaara waa Lautaro Martinez, kaasoo dhaliyay sagaal gool tartamada oo dhan xilli ciyaareedkii hore laakiin wuxuu soo jiitay ku dhawaad ​​qof kasta oo daawanayay isaga oo ciyaara. Marka laga joogo 5 cagaha 8 inji iyo in kabadan 150 rodol, waa nin gebi ahaanba ka duwan weeraryahan, waa macallin sare u kaca ee dareenka iyo dareenka xirfadiisa oo dhameystiran kuwa Lukaku. "Waan ka hor tagi karaa isaga oo aan dhaqaaqi karaa meel kale," ayuu yiri Lukaku. "Tag meelaha qaar ee aan doonayo inaan aado, isagana wuxuu ii heli doonaa kubbadda."
Lukaku ayaa shabaqa soo taabtay kulankii furitaanka ee Inter, guushii 4-0 ay ka gaartay Lecce. Ka dib, Lautaro ayaa dhaliyay kulan furan oo ka dhacay Cagliari, halkaasoo Inter ay ku soo kabsatay ka dib dhicitaankiisii. Laakiin Lukaku had iyo jeer wuxuu u muuqday mid jahwareersan. Wuxuu carabka ku adkeeyay xaqiiqda ah in Argentine ay gadaal ka sii jirto.
"Haddii aad falanqeeyso kooxaha Conté, waxaad ogaan doontaa inay tahay hadiyad. Ciyaar," ayuu yiri Lukaku. Marka kubadu ku jirto meel gaar ah, waxaan samaynaa xoogaa dhaq dhaqaaq ah. Haddii aan guuro, Lautaro waa inuu dhaqaaqo dhanka kale. Haddiise uu guuro, waa inaan ka soo horjeedaa. Waa inaan ogaano halka aan u baahan nahay inaan aadno. "
Waxay ahayd intii lagu jiray ciyaartan Cagliari, oo ay ku guuleysatay 2-1 by Inter, in Lukaku uu yahay dhibane falka cunsuriyada, intaas ka dib Curva Nord Ultras Inter ayaa soo saartay bayaan ay ku cadeyneyso in calaamadaha daanyeerka iyo dhawaaqyada aysan aheyn cunsurinimo laakiin ay tahay wado ay taageerayaasha ku taageeraan kooxdooda. “Kubada cagtu waa ciyaar qof walba raali galinaysa mana aha inaan aqbalno nooc kasta oo takoor ah oo naga dhigaya kuwa xishood badan,” ayuu yiri Lukaku. on Instagram . "Waxaan rajeynayaa in xiriirka kubada cagta adduunka oo dhan uu si adag uga falcelin doono dhammaan kiisaska takoorka ... Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan ku jirnaa 2019. Halkii aan hore u socon lahayn, waan laabanayno waxaanan u malaynayaa in ciyaartoy ahaan, inaan u baahan nahay inaan mideyno oo aan sameyno bayaan ku saabsan arrintan si aan uga dhigno ciyaartan mid nadiif ah oo qof walba u riyaaqsan. "
Conté wuxuu doonayay inuu Lukaku u saxiixo kooxda Juventus 2014. "Ugu dambeyntii, waxaan ku iri," Uma imaanin hadda. Laakiin fursadda xigta, waan joogi doonaa halkaas, ”ayuu yidhi Lukaku. Getty
Bisha Oktoobar, Inter waxa ay wajihi doontaa Juventus kulan ka tirsan Serie A, sidoo kale Barcelona iyo Borussia Dortmund Champions League. In kasta oo lagu soo qaadanayo dhibcaha 21 ee ay dhalisay kooxda kaalinta afaraad ee Inter xilli ciyaareedkii hore wixii ka dambeeya Juventus khasab ma aha in la ansaxiyo, waxa jira dareen badan oo ka badan qolka labiska iyo qolka shirarka. Sideed sano ka dib, fursadda waxaa la siiyaa koox shirkado ganacsi oo ka takhalusaya kooxda Juventus. "Uma maleynayo inaad tiri" waa inaad guuleysataa, "ayuu yiri Lukaku. Tababar cusub, koox cusub, hab cusub oo loo ciyaaro, marka waa hal ciyaar markiiba. Waxaan baranaynaa. Laakiin waa inaan ku dhaqaaqnaa jihada saxda ah. Waana inaan dhahno markasta oo aad ciyaareyso Inter, waa dagaal. "
Waxaan dareemi karaa rabitaanka ah inaan halkaan ku guuleysto, ayuu hadalkiisa raaciyay Sanchez. Taasi waa sababta aan halkaan u joogo. Taasi waa sababta Romelu halkaan u joogo. Ma shaqeyn doontaa? Waxaan haysan doonaa waxyaabo badan oo aan wax ka idhaahno oo ku saabsan dhamaadka xilli ciyaareedka. "
Guuldaradii ka soo gaadhay kooxda Lecce ee Lecce ayaa ka dhalisay farriin farxad leh oo ka imanaya taageerayaasha dhamaan warbaahinta bulshada, iyada oo la moodo in la caddeeyay in scudetto ay iyagu iska leeyihiin Way fiicnaan lahayd in la tixgeliyo taariikhda naadiga, taas oo aan wax u dhicin sidii ay ahayd. Ma ahan qof walba ”, hal-ku-dhigga cusub ee kooxda, ayaa ah mid la aqbali karo oo ah in Internazionale aysan gabi ahaanba aheyn koox kubadeed oo caadi ah. "Pazza Inter" ayaa ku jahwareersan go'aanada wareejinta ee maamulka uu u muuqdo mid qaadanaya, isagoo keenaya qalad daqiiqad sax ah, laakiin wuxuu waalan yahay shaqo ka ceyrintii Luigi Simoni ee 1998, maalin ka dib markii loo magacaabay inuu tababare u noqdo. sanadka, tusaale ahaan, ama shaqaalaynta afar maamule 2016 kaliya. Ama, si lama filaan ah, Morinho wuxuu u horseeday koox hibo leh karti caadi ah laakiin aan ahayn tayo gaar ah. Tit of horyaalka ee 2010. Conte wuxuu isku dayay inuu cadeeyo in, intii uu xukunka hayay, Inter ay weynan doonto. Si taas loo xoojiyo, wuxuu go’aamiyey "Pazza Inter Amala" ama "Crazy Inter, Waan jeclahay!" Heesta dhaqanka ee kooxdu waxay ku bilaabmaysaa "waad ogtahay, ujeeddo aan noloshayda siin lahaa," ayaa kaliya noqon doona inbadan sii ciyaaray kahor kulamada guriga. Waxay u eg tahay inuu isku dayey inuu saameyn la mid ah ku yeesho dhaqanka kooxda sida qolka labiska.
Markii kooxdu ay garoonka ka riixeyso, sida ay uga soo horjeeddo mucaaradka sida xaqiiqada ah magacaabista Lecce, waxay umuuqataa inaan laga adkaan karin. Xitaa haddii aysan ahayn kiiska, waxay noqon kartaa wax cajiib ah in la arko. Daqiiqadii 84e ee Cagliari, ciyaaryahanka garabka ka ciyaara Matteo Politano ayaa fursad u helay inuu kubadsameeyaha ka dhigo garabka midig isla markaana uu helo furitaan u ogolaanaya Lukaku inuu gool ku dhaliyo madax uu isla barbareeyay fursadihiisii ​​oo dhan. Xiriirku wuxuu ahaa tusaale, astaamaha sawirka Conté ee ku soo laabashada nolosha, marka laga reebo in Lukaku uu ku leexday kubbadda meel fog.
Wuu jeedsaday oo madaxa foororshay daqiiqad, laakiin daqiiqad kaliya. Tababaraha cusub, koox cusub, qaab cusub oo loo ciyaaro, waxay umuuqatay inay dhahday. Hadana wuxuu ku noqday duurka si uu mar kale u tijaabiyo.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/internazionale/story/3939809/lukaku-is-on-a-mission-win-with-inter-and-prove-manchester-united-wrong